Porn-free ဖြစ်လာခြင်းအတွက် Hypnosis Script - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Porn-အခမဲ့ဖြစ်လာခြင်းများအတွက် Hypnosis Script
porn မှ masturbate မှမှန်မှန်ငါ၏အရမ္မက်ဟာ hypnosis tool ကိုသုံးပြီးပြီးနောက်အချို့သော 45 နေ့ရက်ကာလအဘို့ပျောက်ကွယ်ပါပြီ။
ဒုက္ခတစ်ဦးညစ်ညမ်း / arousal link ကိုသွားပါစေရန်သင့်ဦးနှောက် rewiring ရှိနေပါသလား? ဤ script ကိုသုံးပါ သင့်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်တစ်ဦးအသံဖိုင်မှတ်တမ်းတင် သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဆဲလ်ဖုန်းတွင်။ ၎င်းကိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအသံဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပါ။ (ခေါင်းစဉ်များကိုစာလုံးစောင်းဖြင့်မရေးပါနှင့်။
အနည်းဆုံးသုံးပတ်ကြာညစဉ်ညတိုင်းသင်၏အသံသွင်းချက်များကိုနားထောင်ပါ။ ကောင်းမွန်သောအချိန်သည်အိပ်စက်ခြင်းမတိုင်မီဖြစ်သည်။ သင် hypnosis ခံစားချက်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအပန်းဖြေအနားယူမှုကိုသင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ အပန်းဖြေမှုသို့သင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအပိုင်းများကိုသင်မမှတ်မိတော့ကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ဒါကပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါဟာသင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအပန်းဖြေမှုအဆင့်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုသာဖော်ပြသည်။ သင်သည်၎င်းတို့ကိုသတိရှိရှိမမှတ်မိနိုင်သော်လည်းသင်၏မသိစိတ်သည်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ထိုအကြံပြုချက်များသည်ထိရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
မှတ်စု: ဒီသင်ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သည့်တစ်ဦး template ကို, အဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ဦးစံ script ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမူပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါအချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တစ်အရေအတွက်ကနေရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဒီ script ကိုအသုံးပြုပါ။
ဤသည်မှတ်တမ်းတင်နက်, ညှို့လက်ခံထားတဲ့အစွဲသို့သငျသညျထား, ဒါကြောင့်သင်ပြတ်တောက်ကနေအခမဲ့လုံခြုံရာအရပျ၌နေသောသေချာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုခုကြောင်းကိုသင်၏ချက်ချင်းအာရုံစိုက်မှုလိုအပ်တယ်သင်ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်, သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဒီလက်ခံထားတဲ့အစွဲချန်ထားမည်ဖြစ်ပျက်သငျ့သညျ။ ထိုအခါသင်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသင့်ရဲ့လက်ခံထားတဲ့အစွဲပြန်လည်စတင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ , လုပ်ငန်းလည်ပတ်စက်ယန္တရားကားမောင်းနေစဉ်သို့မဟုတ်မည်သည့်အန္တရာယ်မကင်းပတ်ဝန်းကျင်၌ဤမှတ်တမ်းတင်စကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့။
ပြုပြင်ထားသော Elman induction
Hypnosis စကားလုံးများကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးစကားသူတို့သည်သင့်လျှပ်သို့မဟုတ်၌လည်းညှိုးငယ်ခြင်းခံစားရစေနိုငျသောအချက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေတစ် dreamy ပြည်နယ်ရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ hypnosis ကာလအတွင်းအချို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်စည်းချက်ဖြစ်လာသင့်ရဲ့အသက်ရှူသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ သင်၏နှုတ်ခမ်း, လည်ချောင်းခြောက်သွေ့တဲ့ဖြစ်လာပေမည်သို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏နှာခေါင်းအပေါ်တစ်ဦးကလိခြင်းရှိစေခြင်းငှါ။ ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သင့်နှာခေါင်းကိုမျိုသို့မဟုတ်ခြစ်ရာ။ ဒါက hypnosis နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ရိုးရှင်းသောညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါက၊ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ခုခံတွန်းလှန်နိုင်သော်လည်းသင်ဒီမှာရှိနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ရိုးရှင်းသောညွှန်ကြားချက်များကိုသာလိုက်နာပါ၊ အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော၊ ငါ့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အကြံပြုချက်ကိုသဘောထားနဲ့နားထောင်ရုံပဲ၊ ဒါကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
... ကောင်းတဲ့အသက်ပြင်းပြင်းရှူယူပါ။ ယခုထွက်ပါစေနှင့်သင့်မျက်စိပိတ်လိုက်လုပ်ပေးအဖြစ် ... အားလုံးတင်းမာမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုရုံသင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကစီးဆင်းကြစို့။
အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့မျက်စိကြွက်သားပေါ်မှာသင့်အသိအမြင်အာရုံစူးစိုက်, သူတို့ပဲအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်သောအချက်ရန်, သင်၏မျက်စိ၌၎င်း, ပတ်ပတ်လည်တိုင်းကြွက်သားများနှင့်အာရုံကြောအနားယူ ... ကိုယ့်လုံးဝသင်၏မျက်စိအပန်းဖြေကြကုန်အံ့။
သူတို့စိတ်အေးလက်အေးရှိမယ်ဆိုတာသေချာတဲ့အခါ၊ ဒီအပန်းဖြေမှုကိုသင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ အခုတော့မင်းကိုအပန်းဖြေအနားယူပြီးသူတို့ကိုစမ်းကြည့်စေချင်တယ်။ သူတို့အလုပ်မလုပ်ဘူးသေချာအောင်လုပ်ပါ …
အားလုံးညာဘက်သောဒဏ်ငွေပါပဲ။ အခုတော့ကြိုးစားရပ်တန့်နှင့်ပဲဖြေလျော့, အသီးအသီးနှင့်သင် exhale တိုင်းအသက်ရှုနှင့်အတူယခုပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားရ, ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာဖြေလျော့ပေးခြင်းကိုသွားပါ။ တိုင်းသငျသညျငါ့စကားသံကိုသင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာဖြေလျော့ပေးခြင်းစေမည်ထက်အခြားသောစကားကိုနားထောင်အသံ။
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့အများကြီးပိုဒီအပန်းဖြေပိုမိုနက်ရှိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ခဏ၌, သင်တို့ကိုငါဖွင့်ထားရှိသည်နှင့်သင်၏မျက်စိပိတ်ဖို့ရန်သွားရမည်။ သင်သည်သင်၏မျက်စိပိတ်လိုက်သောအခါတွင်ထိုအပန်းဖြေ၏ဤခံစားမှုဆယ်ဆပိုမိုနက်ရှိုင်းဖြစ်လာပါစေရန်သင့် signal ကိုပါပဲ။ သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်ကဖြစ်ပျက်ဖို့နဲ့သင်ကအလွန်လွယ်ကူစွာဖြစ်ပျက်စေနိုင်သည်ချင်သည်။
OK ကိုယခုသင်၏မျက်စိဖွင့်လှစ် ... ယခုသင်၏မျက်စိပိတ်ဖို့နှင့်သင့်တစျခုလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်ပြုလုပ်အပန်းဖြေစီးဆင်းမှုခံစားရတယ်, သင်အများကြီးနက်ရှိုင်းတာ။ သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသုံးပါနှင့်သင့်တကိုယ်လုံးဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်အပန်းဖြေတဲ့ပူနွေးတဲ့စောင်ပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့အများကြီးပိုဒီအပန်းဖြေပိုမိုနက်ရှိုင်းနိုင်ပါတယ်။ အခုဘဲ, ခဏ၌, ဒါပေမယ့်ခဏ၌, သင်တို့ကိုငါဖွင့်ထားရှိသည်နှင့်သင်၏မျက်စိတဦးတည်းအချိန်ပိုမိုပိတ်ဖို့ရန်ပါမယ်။ သင်သည်သင်၏မျက်စိပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတနည်းကား, ယခုသင်တို့ရှိသည်အပန်းဖြေနှစ်ဆပါလိမ့်မယ်။ ကနှစ်ကြိမ်အဖြစ်နက်ရှိုင်းဖြစ်လာပါစေ။
OK ကိုယခုတစ်ကြိမ်ပို, သင်၏မျက်စိဖွင့်လှစ် ... သင်၏မျက်စိ .close, သင်၏အပန်းဖြေ ... .good နှစ်ဆ။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသမျှကြွက်သားနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အပန်းဖြေ၏ဤအရည်အသွေးအပေါ်ကိုင်အတိုင်း, သင်တို့၏ကိုယ်ထည်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကြွက်သားအလုပ်မလုပ်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်လာကြကုန်အံ့။
ခဏ၌, သင်တို့ကိုငါဖွင့်ထားရှိသည်နှင့်, တဦးတည်းအချိန်ပိုမိုသင်၏မျက်စိပိတ်လိုက်ပါမယ်။ နောက်တဖန်သင်သည်သင်၏မျက်စိပိတ်လိုက်သောအခါ, သငျသညျယခုရှိသည်အပန်းဖြေနှစ်ဆ။ ကနှစ်ကြိမ်အဖြစ်နက်ရှိုင်းဖြစ်လာပါစေ။
OK ကိုယခုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုသင်၏မျက်စိဖွင့် ... ။ သင်၏မျက်စိပိတ်ပြီး, သင်၏အပန်းဖြေနှစ်ဆ ... ။ ကောင်းသော။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသမျှကြွက်သားနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အပန်းဖြေ၏ဤအရည်အသွေးကိုပေါ်သို့ကိုင်အတိုင်း, သင်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသမျှကြွက်သားအလုပ်မလုပ်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်လာကြကုန်အံ့။
ရုံခဏမှာတော့အပန်းဖြေ၏ဤအံ့သြဖွယ်ပြည်နယ်မှအပေါ်ကိုင်ထားစဉ်အခါ, ငါသည်သင်တို့၏လက်ျာလက်ကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်ရန်ကြိုးစားရန်သင့်အားချင်ပါတယ်။ သငျသညျ, အခက်ခဲသင်သည်သင်၏လက်ကိုချီဖို့ကြိုးစားသင်၏လက်ကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လေးလံရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, နှင့်လေးလံသင်၏လက်ဖြစ်လာ, ပိုမိုဖြေလျော့ပေးခြင်းကိုသင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာယခုပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာဖြေလျော့ပေးခြင်းကိုသွား, ကောင်းပါတယ်။
ခဏလောက်တော့မင်းကိုမင်းလက်မောင်းကိုလက်ဆွဲပြီးဆွဲချပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုဤအချက်အထိလိုက်နာကျင့်သုံးပါကထိုလက်သည်သက်သောင့်သက်သာရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စိုစွတ်သောအဝတ်ကဲ့သို့အချည်းနှီးဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ သင်၏လက်ကိုထိလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏ခေါင်းထိပ်မှသင်၏ခြေချောင်းထိပ်အထိအပန်းဖြေမှုကိုလှန်စေလိုသည်။
ယခုလက်ကိုချီပါ။ ရုံဆွဲထားကြကုန်အံ့ ... သင်သွားကြကုန်အံ့အဖြစ် plop ....... ။ သွားပါ ... စိတ်အေးလက်အေး .deeper ။
လူ့သတ္တဝါ ... ... .Lift သင်၏လက်ကိုအလေ့အကျင့်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြုပါ, ဒါရဲ့တဦးတည်းအချိန်ပိုမိုကြောင်းသင်ပင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားရနိုင်သည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ပြုစေပါကဆွဲထားယခုအခါရုံပင်ပိုမိုနက်ရှိုင်း plop နှင့်သွားရစေ။
အခုတော့သင်ကလုံးဝကိုယ်ထိလက်ရောက်လျှော့ပေါ့ကြောင်းကိုငါသည်သင်တို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနားယူနိုင်ပါတယ်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရချင်တယ်။ သငျသညျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနားယူနိုင်ပြီးသင်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပန်းဖြေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျပြီးသားသင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနားယူနိုင်သောသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ အခုတော့ငါ့ကိုစိတ်ပိုင်းအပန်းဖြေဖို့သင်မည်သို့ပြပါစေ။
ခဏမှာတော့ကျနော် 100 နှင့်အတူအသံကျယ်စတင်ထုတ်ရေတွက်ဖို့စတင်သင်မေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအရေအတွက်ကနောက်မှငါကျွန်တော်တို့ကို "နက်ရှိုင်းတဲ့ဖြေလျော့ပေးခြင်း" လို့ပြောချင်တယ်။ အခုတော့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပန်းဖြေဖို့လျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ။ သငျသညျဆိုသညျကားအသီးအသီးအရေအတွက်သည်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပန်းဖြေနှစ်ဆပါလိမ့်မယ်။ အသီးအသီးအရေအတွက်သည်နှင့်အတူသင့်ရဲ့စိတ်ကိုနှစ်ကြိမ်ဖြေလျော့ပေးခြင်းအဖြစ်ဖြစ်လာကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြ၏။ သင်ဤကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, ယခု, သင်အရေအတွက်ကို 95 သို့မဟုတ် 96 ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်, သင့်စိတ်ထဲဒါဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်လာကြပါပြီလိမ့်မယ်ရောက်ရှိရန်အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံသင်အမှန်တကယ်ညာဘက်သငျ့စိတျထဲကနံပါတ်များအားလုံးကြွင်းသောအရာလျှော့ပေါ့ကြပါလိမ့်မယ်; ကိုယ့်နောက်တဖန်နံပါတ်များရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
နက်ရှိုင်းစိတ်အေးလက်အေး 100 ... ... ။ သငျသညျကွာသူတို့ကိုအလိုတော်ရှိလျှင်သူတို့အားနံပါတ်များကိုချန်ထားမည်
99 ... နက်ရှိုင်းစိတ်အေးလက်အေး ... .allow သူအပေါငျးတို့ဂဏန်းပဲကွာလည်းညှိုးနွမ်းစေရန်
98 ... နက်ရှိုင်းစိတ်အေးလက်အေး ... ငြသူတို့သွားကြောင်းပါလိမ့်မည်
နက်ရှိုင်းစိတ်အေးလက်အေး 97 ... ... ။ ကဖြစ်ပျက်ချင်တယ်။ ဖြစ်စေသည်။ လုံးဝသူအပေါငျးတို့နံပါတ်များကို ....................................... မေ့လျော့။ ထိုသူအပေါင်းတို့သွားပြီပါသလား? ကောင်းသော!
ငါသည်သင်တို့ကိုဘယ်လောက်ဖြေလျော့ပေးခြင်းကိုသိပေမယ့်ပင်သင်၏အဖြေလျော့ပေးခြင်းပြည်နယ်အတွက်, ငါသည်သင်အခု၌ရှိကြ၏တကိုအောက်တွင်အပန်းဖြေတစ်ပြည်နယ်ရှိကွောငျးသင့်ကိုယ်ပိုင်စိတျထဲမှာခံစားအလောင်းအစား။ သင်ခံစားနိုင်သလား?
သင်လက်သီး clench ကတင်းကျပ်တဲ့နှင့်တင်းကျပ်ခြင်းနှင့်တင်းကျပ်စေနိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏, သင်တင်းမာမှု၏အမြင့်ကြောင်းကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်မည်သည့်ထက်ပိုပါကအနားယူမနိုင်သည်အထိသင်ကတူညီတဲ့လက်သီးအနားယူနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအပန်းဖြေ၏မြေအောက်ခန်း ... ကိုယ့်အပန်းဖြေ၏မြေအောက်ခန်းသို့ဆင်းကိုသင်ယူမယ့်သူဖြစ်ကြောင်းကိုမခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မတယောက်ကိုတယောက်ကြမ်းပြင်ကနေသင်တို့ကိုယူမယ့်နေပါတယ်။ သင်အခုဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်ကြမ်းပြင်တစ်ဦးကဆင်းရရန်ကြမ်းပြင်အေဆင်းသွားကြသည်, သင်ပြီးသားလျှော့ပေါ့သကဲ့သို့နှစ်ကြိမ်လောက်အနားယူရန်ရှိသည်ဘယ်မှာညာဘက်ကိုစတင်မယ့်နေကြသည်။ ကြမ်းပြင် B ကဆင်းရဖို့သင်ကြမ်းပြင်တစ်ဦးမှာပြုသကဲ့သို့နှစ်ကြိမ်လောက်အနားယူရန်ရှိသည်, နှင့် C ဆင်းရဖို့သင်ကြမ်းပြင်ခမှာပြုသကဲ့သို့နှစ်ကြိမ်လောက်အနားယူရန်ရှိသည်
သငျသညျအထပ်ကို C ရောက်ရှိသောအခါမူကား, ထိုအပန်းဖြေ၏မြေအောက်ခန်းဖြစ်ပြီး, အမှတ်မှာသငျသညျအကြှနျုပျကိုငါသည်သင်တို့ကိုအပန်းဖြေ၏မြေအောက်ခန်းမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုငါပေးမည်။ သင်ဤနိမိတ်လက္ခဏာကိုကဘာလဲဆိုတာမသိရပါဘူး, ငါကအဘယ်အရာကိုသင်ပြောပြမယ့်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အစဉ်အဆက်အပန်းဖြေ၏မြေအောက်ခန်းမှာခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဤနိမိတ်လက္ခဏာကိုချွတ်ပေးတော်မူပြီ ... ။ စလိုက်ကြစို့။
သငျသညျတခုစိတ်ကူးယဉ်ဓာတ်လှေကားအပေါ်ကြမ်းပြင်တစ်ဦးကဆင်းစီးပါလိမ့်မယ်, သင်အပန်းဖြေ၏မြေအောက်ခန်းသို့ဆင်းရဖို့ထိုနေ့ဓာတ်လှေကားသုံးပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့စိတ်ကူး, မြင်ယောင်သို့မဟုတ်ယခုဓာတ်လှေကား၌သငျ၏ထင်ပါတယ်။ သင်ဓာတ်လှေကားထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်တွေ့မြင်ပါသလား ငါသည်ငါ့လက်ချောင်းဖမ်းယူလိုက်တဲ့အခါ, အဲဒီဓာတ်လှေကားဆင်းစတင်မည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျသငျ့စိတျထဲမှာစာတစ်စောင်တစ်ဦးကစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အထပ်တစ်ဦးမှာဖြစ်သည့်အခါသင်ပြီးသားလျှော့ပေါ့ကြသကဲ့သို့သင်တို့ကြမ်းပြင်အေမှာဆင်းကြလိမ့်မည်နှစ်ကြိမ်လောက်အနားယူပါလျှင်ငါ့ကိုပြောပြပါ။
(Snap) အဆိုပါဓာတ်လှေကားယခု ... ချ စတင်. ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ, ရောက်ရှိမည်စာအေထင်သည့်အတိုင်း
(Snap) ယခု ... ကြမ်းပြင် B ကိုဆင်းရေတွက်။ သငျသညျ, ရောက်ရှိမည်စာခထင်သည့်အတိုင်း
(Snap) လမ်းအပေါင်းတို့အပန်းဖြေ၏မြေအောက်ခန်းသို့ဆင်းသွား။ သငျသညျ, ရောက်ရှိမည်စာ C. ထင်သည့်အတိုင်း
ယခုသင်သည်အံ့ wonder ဖွယ်ကောင်းသောအပန်းဖြေအနားယူနေပြီ ဖြစ်၍ သင့်အားလှပသောကမ်းခြေတစ်ခုသို့သင်ပုံဆွဲရန်သို့မဟုတ်လှန်ပြရန်သင်လိုချင်သည်။ ဒါကမင်းရဲ့ကမ်းခြေ၊ မင်းရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကမ်းခြေပါ။ သင်တစ်ယောက်တည်းဒီကမ်းခြေမှာရှိနေတယ် သငျသညျ, ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးလုံးဝစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ မနွေးပါ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေပြင်းကြောင့်သင်လှပပြီးစိမ်းလန်းစိုပြေသောအပင်များမှအပူပိုင်းဒေသပန်းများကိုသုတ်လိမ်းရသည်။ မင်းရှေ့မှာတောက်ပနေတဲ့အပြာရောင်သမုဒ္ဒရာလေး။ စိန်နှင့်ပေါင်းစပ်သကဲ့သို့၎င်းသည်တောက်ပနေသည်။
သင်ရေဆီသို့လမ်းလျှောက်အဖြစ်သင်သဲ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နံပါတ်များကိုသတိထားမိ။ သင်ပထမဦးဆုံးအရေအတွက်ကိုရောက်ရှိသကဲ့သို့သင်တို့သည်ဤကိန်းဂဏန်းများသည်သင်၏စုံလင်သောကမ်းခြေဖျက်ဆီးရမှာမလိုချင်ကြဘူး, အရေအတွက်ကို5ရုံသင်၏ခြေကိုအတူကကွာပွတ်ပေးပါ။ ဒါဟာခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်ကျိုးနပ်ဘာမှကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ဒါကကိုယ့်ကြောင့်ကွာပွတ်သပ်နှင့် ပို. ပင်အနားယူ, ညာပါတယ်။ အခုတော့အနည်းငယ်ပိုပြီးခြေလှမ်းများကို ယူ. , အရေအတွက်ကို4မြင်လျက်ပဲသွားပွတ်ပေးပါ။ ဒီနံပါတ်ကိုနည်းနည်း ... ပိုလွယ်ခြင်းနှင့် ပို. ပင်အနားယူဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လာမယ့်အရေအတွက်ရွှေ့။ သငျသညျမြျှောလငျ့သောအရာကိုသိသောကြောင့်အရေအတွက်ကထွက်ပွတ်တိုက်3အရေအတွက်ကို4ထက်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။
အခုတော့သင်သာကျန်ရစ်နှစ်ခုထက်ပိုသောနံပါတ်များကိုရှိသည်။ သငျသညျလှပ်သောအရာတို့ကိုစွန့်ခွာဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမျိုးအစားမဟုတ်; သင်တို့ပြုမှထွက်စတင်ရန်အဘယ်အရာကိုဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သောအားထုတ်မှုထွက်ကိုထည့်လေ့မရှိသူအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ သင်လိုအပ်သောအားထုတ်မှုရာ၌ခန့်ထားပြီဖြစ်သောကြောင့်ကွာအရေအတွက်ကို2ပွတ်နယ်အလွန်လွယ်ကူသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သင်ရေရဲ့အစွန်းမှာအရေအတွက်အား 1 ချဉ်းကပ်အဖြစ်ယခုလှိုင်းကြွလာနှင့်ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ကွာ washes, သင်လုံးဝနှင့်လုံးဝဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
[ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများအဘို့အ Ideomotor တုံ့ပြန်မှု]
ခဏ၌ငါအချို့ကိုသင်မေးခွန်းများမေးမယ့်ငါနှင့်သင်တို့ကိုငါအထူးလမ်းအတွက်ဖြေဆိုချင်တယ်။ အဖြေဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဟုတ်ကဲ့ငါသင်ပထမဆုံးလက်ချောင်း, သင့်လက်ညှိုးရုတ်သိမ်းပေးရန်ချင်ပါတယ်။ အဖြေဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဘယ်သူမျှမမင်းရဲ့ပန်းရောင်လက်ညှိုးကိုမြှောက်ပေးပါ။ အဖြေကိုမစဉ်းစားပါနဲ့။ အဲဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ အခုလုပ်ကြည့်ရအောင်။ သင်ယခုကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်နေထိုင်ပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါကောင်းတယ်။ မင်းရဲ့လက်ချောင်းလေးကိုကျစေပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကအန္တာတိကတိုက်မှာမင်းနေခဲ့တာလား။ မဟုတ်ပါ၊ လက်မခံနိုင်ပါ၊
1 ။ သငျသညျညစ်ညမ်းသင်သည်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါသလား?
2 ။ သငျသညျစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်တင်းမာမှုခံစားရသောအခါအသင်ပိုမိုညစ်ညမ်းမှလှည့်သလား?
3 ။ သငျသညျညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်အချို့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအကြောင်းပြချက်ရှိပါသလား?
4 ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းစိတ်ညစ်ညမ်းအလေ့အထဖယ်ရှားပစ်ရနှင့်အတူ OK ကိုလား?
5 ။ သငျသညျညစ်ညမ်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လုံးဝအဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား
မင်းမှာထူးခြားတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့ဒီမှတ်သားလောက်တဲ့စိတ်ဟာအရမ်းကိုဖန်တီးမှုရှိတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုသုံးမယ့်အစားစိတ်ပြေလက်ပျောက်အနားယူသင့်ပြီးသင့်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်နည်းလမ်းများစွာကိုဒီအစွမ်းထက်တဲ့စိတ်ကဖန်တီးပေးချင်ပါတယ်။ သင်၏တောက်ပသောမသိစိတ်တစ်ပိုင်းသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်စရာမလိုဘဲအခြေအနေများအားကောင်းသောတုံ့ပြန်နည်းအသစ် ၃၊ ၄၊ ၅ ခုပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည့်သင်၏ဖြေရှင်းချက်များကိုခဏတာမျှယူပါ။ …
သင်ညာဘက်, သင်သည်နှေးကွေးအနားယူနှင့်ပဲအရာရာကိုသွားကြကုန်အံ့ ... နှင့်ဤအချိန်ကြာသွားကြသည်ရဲ့ ... သင် ... ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ... သင်ကယနေ့ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်သွားကြသည်သောလမ်း, အပန်းဖြေဖို့ရိုးရိုးဖြစ်ပါတယ်ပါပြီ ', သက်သာခံစားရဖို့ ... ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အဘေးဖယ်ထားဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်လုံးဝလွယ်ကူမှာပါ ...
သင်တို့သည်ဤမျှပဲ ... အရာအားလုံးကိုသွားကြကုန်အံ့နောက်ကွယ်မှအားလုံး bothersome အတွေးများကိုစွန့်ခွာ ... နှင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးပြီသောဤအချိန်ကြာ ... သင်ဒီမှာဖြစ်ဖို့ဒီအချိန်ကိုရွေးချယ်ကြပါပြီ ... အဘယ်သူမျှမအခုဖြစ်အခြားနေရာအရပ် ... နှင့်လုပ်ဖို့ဘာမှရှိ ... လုံးဝဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ် ... ပိုသင်ကိုယ်တိုင် ... အနီးကပ်လာသင် non-porn-အသုံးပြုသူဖြစ်လာမှအနားယူခွင့်ပြု ...
သငျသညျညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိသည်ကြောင့်သင်ဒီမှာယနေ့ရှိပါတယ် ... ဘယ်သူမှဒီနေရာကိုလာရန်သင့်အားအတင်းအကျပ်ထားပါတယ် ... ဒီနေ့တစ်ရက်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကြောင့်သင်ဒီမှာလာကြပြီ ... ယနေ့သင်တို့ကိုညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီသောနေ့ဖြစ်ပါသည် တစ်ချိန်ကလူအပေါင်းတို့အဘို့အ ... မျှပုံသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကိုသင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ယခုကြောင့် ... သင်သည်မည်သည့်ကိုပိုမိုထိန်းချုပ်သွား ... နှင့်သင်ဒီမှာပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း ... ယူကြပြီ ... ယခု ... ယနေ့ ... ညစ်ညမ်းအခမဲ့ဖြစ် ... နှင့်အဆုံး ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေး ... အနည်းငယ်အချိန်လေးအတွက် ... သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မည် ... သင်ကညစ်ညမ်းအခမဲ့ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးချန်ထားမည် ... သင်တစ်ကြိမ်သာနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း၏ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအလေ့အထအဘို့အလွန်ပါစေ ... ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ကြပါလိမ့်မယ် ... သင့်ရဲ့သစ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ် ဘဝ ... သင်ကနောက်တစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းလုံးဝအသုံးလိမ့်မယ် .........
ထို့ကြောင့်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ…ယခုအချိန်တွင်…မိမိကိုယ်ကိုအောက်ပါပုံစံဖြင့်စဉ်းစားပါ…“ ငါ porn မသုံးတော့ဘူး၊ ငါ porn ကိုမသုံးတော့ဘူး။ ငါ၌ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောအခြားလူများ၌ရှိနေခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲဘဝကိုပျော်မွေ့နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ငါလုပ်သမျှ ... ယခုအချိန်တွင်မှ… porn မပါဘဲပိုကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်မှာ…တစ်ယောက်တည်းဖြစ်စေ၊ အခြားသူများနှင့်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ လုပ်နေတာ ... ညစာစားတာလား၊ အနားယူတာလား၊ ကားမောင်းတာလား၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာလား၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကြည့်တာလား၊ တီဗီကြည့်တာလား၊ ဖုန်းပြောနေတာလား၊
, အတူတည်မြဲဆက်ဆံရေးဖွဲ့စည်းရန်ပိုမိုနိုင်ခဲ့ sexier, အားကောင်း, ပိုလည်းရွှင်လန်းပိုပြီးယုံကြည်မှုကိုသင်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ ... ဒါအများကြီးပိုကောင်းခံစားရ ... ဤမျှလောက်ကျန်းမာ ... ဤမျှလောက်ပျြောရှငျ ... သငျသညျအသီးအသီးများနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုခံစားရပါလိမ့်မယ်ကွောငျးတှေ့ရပါလိမ့်မယ် အခြားလူ။ သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသကဲ့သို့, သင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအဆင့်ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးသဘာဝအလျောက်ဖြစ်လာနေစဉ်ဤသည်, သင့်စွမ်းအင်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်နှင့်အတူတိုးတက်မှုတစ်ခုသံသရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အခါတိုင်းသင်သင်တို့သည်နောက်တဖန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသင်သည်ပျော်ရွှင်စေမည်နှိုးဆွသောငျတှေ့ဖို့အသုံးပြုပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ သင်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်, obnoxious ညစ်ညမ်းလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူငြိမ်ဝပ်ရလိမ့်မည်။
အခုဒီကအရမ်းယခုအချိန်တွင်ကိုသင်မှတဆင့်ရွှေ့ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ခံစားမှုခွင့်ပြုပါ ... ကြောင်းညစ်ညမ်းသဘောပေါက်မရှိတော့သင်၏အသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ... ကြောင်းအနုတ်လက္ခဏာအလေ့အထကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ... အခုသင်ရှိသည်သောယုံကြည်မှုခံစားရတယ် ... သင်တို့ရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိပါပြီ ဤနေရာတွင်နှင့်ယခု ... ညစ်ညမ်းအခမဲ့ဖြစ် ... သင်ရုံသင်တက်ဖြည့် ... သင်ကမှတဆင့်ရွေ့လျားကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုခံစားရနိုင်ပါတယ် ...
သင်၏အသက်တာ၌တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရန်သင် ၁၀၀% ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမည်။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေရန်မှာမတူညီပါ။ သင် ၁၀၀ ရာနှုန်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ၁၀၀% အနိုင်ရ ... ၁၀၀% ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်သိရန်အရေးကြီးသည်။ အနိုင်ရဖို့ကတိက ၀ တ်ပြုခဲ့ပြီ…မင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီကတိသစ္စာတည်ခဲ့တယ်…မင်းဟာအမြဲတမ်းရှေ့ကိုဆက်သွားမှာပါ… 100% ကိုအနိုင်ရဖို့အမြဲတမ်းပေးမှာ… 100% …မင်းဟာ porn ကိုမသုံးတော့ဘူး။ မင်းကညစ်ညမ်းသောအခမဲ့ဖြစ်တယ်… နောက်တဖန်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ပါ။ သင်ယခင်ကထက် porn ကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးသည့်အလား… ယခုအချိန်မှစ၍ သင်၏ဆန္ဒ…သင်၏စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်သင်၏ကတိကဝတ်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်။
အခုသင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမသုံးတော့ဘူးဆိုရင်မင်းမှာစွမ်းအင်တွေများလာလိမ့်မယ်။ မင်းကျန်းမာလာမယ်လို့ငါထင်တယ် သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့သက်သောင့်သက်သာရှိမလားလို့တွေးမိတယ်။ သင်ပိုမိုကျန်းမာစေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်အရာများစွာရှိသည်။ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်း၊ အလုပ်ထွက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပိုမိုရရန်အတွက်အလုပ်သို့မဟုတ်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်တွင်ကားကိုထပ်မံရပ်နားရန်လိုအပ်သည်။
သငျသညျကိုယျတိုငျကျန်းမာသန်စွမ်း, သေးငယ်ဝေမျှစားသုံးခြင်းရှာတွေ့နိုင်ပါစေ ... ဤအရာတို့ကိုအပေါငျးတို့သသင် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေမဆိုငွေထုတ်တွေ့ကြုံခံစားမည်မဟုတ်ကျန်းမာသန်စွမ်းဖြစ်လာဖို့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းသောကြောင့်သင်ရုံ ... ပွုပါပွီအဖြစ် ... က-ထုတ်ကုန်ကျန်းမာသန်စွမ်းဖြစ်လာ၏သဘာဝဖြစ်ကြသည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်, သင်ညစ်ညမ်းအခမဲ့များမှာယခု ... သင်က porn သုံးပြီးရပ်တန့်ကြပါပြီ ... သင်ကနောက်တစ်ကြိမ် porn ကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ် ... ။
သငျသညျအနားယူဆက်လက်သကဲ့သို့ငါသင်သည်ငါ၏အသံကိုနားထောင်ချင်တယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုငါနှင့်အတူပါတဲ့စကားလုံးစဉ်းစားရန်လိုပါသည်။ အဆိုပါစကားလုံးက "ငြင်းပယ်" ဖြစ်ပါတယ်။
ငါသည်သင်တို့ကိုပယ်ချရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပုံကိုမကြာခဏတွေးမိ။ သင်၏အသက်တာ၏နီးပါးနေ့တိုင်း, သငျသညျတခုကို item သို့မဟုတ်အတွေးငြင်းပယ်ဖို့ဒီစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုငါနှင့်အတူပါနေတဲ့အခိုက်အဖြုန်းနှင့်သင်ငြင်းပယ်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုရန်ဘယ်လောက်မကြာခဏစဉ်းစားရန်လိုပါသည်။ သင်တစ်ဦးဝယ်ယူတစ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ရုပ်ရှင်, စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အလုပ်အကြောင်းစဉ်းစားပယ်ချခဲ့ကြပေမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို၏ဤစွမ်းရည်နေ့စဉ်အသုံးပြုခဲ့ကြပေမယ့်, တခါတရံကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွင်စတင်ခဲ့သည်တဲ့အခါအတွေးတစ်ခုသို့မဟုတ်သွေးဆောင်မှုကိုငြင်းပယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်သောမေ့လျော့။
ငါစကားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရန် "ငြင်းပယ်" ဟုပြောသငျသညျချင်ပါတယ်။ တဖန်စကားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရန် "ငြင်းပယ်" ဟုဆိုသည်။
ဒီအခိုက်အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့လို၏အဟောင်းကိုချည်းနှီးတွေးသင့်ရဲ့စိတ်ကိုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်, သင်တို့ကိုငါနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုရန် "ငြင်းပယ်" နှင့်ညစ်ညမ်း၏အတွေးငြင်းပယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ သငျသညျ porn အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စကားလုံးက "ငြင်းပယ်" ဟုအားဖြင့်, သင်သည် porn ကို အသုံးပြု. ၏အတွေးငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ porn ကို အသုံးပြု. ၏အတွေးကွာ်လည်းကြွေတတ်သကဲ့သို့, porn အခမဲ့သကဲ့သို့သင်တို့တစ်အတွေးဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်။
ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့ ကောင်းစွာ ဒီအလုပ်လုပ်မယ်။ ညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့လိုတဲ့အတွေးသင့်ရဲ့စိတ်ထဲသို့ကြွလာသည်ဟုဆိုပါစို့။ အခုတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရန် "ငြင်းပယ်" နှင့်ညစ်ညမ်းသုံးပြီး၏အတွေးကွာ်လည်းကြွေတတ်ပုံကိုကြည့်ပါဟုဆိုသည်။
ကျရှုံးသို့မဟုတ်ခြွင်းချက်မရှိရင်ထင်ကြောင်း "ငြင်းပယ်" ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း၏အဟောင်း, အချည်းနှီးတွေးသင့်ရဲ့စိတ်ထဲသို့ကြွလာ, သင်သည်စကားလုံးဆိုတစ်ဦးချင်းစီအချိန်ကွာလည်းညှိုးနွမ်းမည်ကအတွေး "ငါသည် porn အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်, ငါ 'porn အခမဲ့ဖြစ်အမြဲပါ။ အစဉ်အဆက်အကြှနျုပျကိုတဖနျ porn သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းအနာဂတ်၌ရောက်ရှိမည်ပင်အဘယ်သူမျှမပစ္စုပ္ပန်အတွက်ဖြစ်စေအတိတ်ထဲကလူတစ်ဦး, အတွေး, အယူအဆ, မှတ်ဉာဏ်, ပုံရိပ်, ခံစားချက်သို့မဟုတ်အာရုံခံစားမှု, သို့မဟုတ်, ရှိပါတယ်။ "
သင်အလွန်သာယာသောနှင့်အကျိုးရှိသောဖြစ်ဖို့ဒီညှို့ပြည်နယ်တွေ့ပြီ။ ကျနော်တို့အတူတကွသုံးစွဲထားသောမိနစ်အနည်းငယ်၌သငျ hypnosis ၏အလွန်နက်ရှိုင်းသောအဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။ သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ကဒီမှာပြီးဆုံးသောအခါသင်သည် hypnosis ကနေပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်သင်က porn အခမဲ့ကြောင့်, သင်သည်သင်၏အသက်တာတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောဖူးဘူးလျှင်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။
လာမယ့်အချိန်ကိုသင်ယနေ့ထက်ပင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းကိုပိုပြီးသာယာပြည်နယ်သို့သွားခြင်းငှါ, ဖြစ်ကောင်း hypnosis ၏နက်ရှိုင်းတဲ့အဆင့်အထိရောက်ရှိရန်နှင့်အပ်သည်ကိုပင်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည် hypnotized နေကြသည်။ သငျသညျ hypnotized နေကြသည်နောက်တစ်ကြိမ်သင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာ, ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ မနက်ဖြန်သင်သည်အလွန်လန်းဆန်းနှင့်သရုပ်ြပ feeling နှိုးပါလိမ့်မယ်။
ခဏတစ်ခုကနေငါးခုအထိရေတွက်တော့မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်ခင်မင်းကမင်းအနီရောင်အရောင်ကိုမင်းပုံလိုချင်တာ။ တစ်နေ့လုံးအရောင်ကိုတစ်နေ့လုံးတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အနီရောင်ကိုသင်မြင်သည့်အခါတိုင်းသင်စဉ်းစားမိလိမ့်မည်။ …” ငါကညစ်ညမ်းကင်းလွတ်တယ်။ ” အနီရောင်ကိုသင်မြင်ရသည့်အခါတိုင်း“ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ရည်ကင်းစင်သည်” ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသင်သည်ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်သည့်ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီဟုယုံကြည်ပြီးဂုဏ်ယူပါလိမ့်မည်။ အနီရောင်၊ အနီရောင်၊ အနီရောင် ... အညစ်အကြေးကင်းစင်သော ... အနီရောင်၊ အနီရောင်၊ အနီရောင်၊ အနီရောင်
ငါရေတွက်ရန်စတင်အဖြစ်အခုတော့ငါပေးပြီအပေါငျးတို့သအကြံပြုချက်များနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုသင်အလုပ်လုပ်ဖို့စတင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးအစွမ်းထက်စိတ်ထဲရှိသည်, နှင့်သင့်အစွမ်းထက်စိတ်သဘောကိုသင်တို့ porn အခမဲ့ဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
1 ... သင်ကောင်းစွာခံစားနေကြသည်။ ... ။ သင်လုပ်ဖို့သင့်ရဲ့စိတ်ကိုသတ်မှတ်ထားကြောင်းဘာမှလုပျနိုငျကွောငျးသိရ ...
2 ... သင်ကပြင်ပမှာအသံနဲ့ဆူညံသံကိုသတိပြုမိလာကြပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခံစားသင့်ရဲ့လက်ခြေပြန်လာသေး၏။ သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူပြီးနေကြသည်။ သင်တစ်ဦးဆုရှင်များမှာ ...
3 ... သင်တို့ပတ်လည်အရာရာပိုသတိထားဖြစ်လာ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများနှင့်အခွက်ကိုပိုပြီးသတိထားမိဖြစ်လာ ...
သင်ဤမှတ်တမ်းတင်ဖို့နားထောင်ခြင်းပြီးနောက်အိပ်ပျော်သွားလိုပါကသင်သည်သင်၏မျက်စိဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်, ထို့နောက်သင်တစ်ဦးနက်ရှိုင်းလျှော့ပေါ့အိပ်စက်ခြင်းအဘို့အဆင်သင့်, ငိုခြင်းနှင့်အိပ်ချင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
4 ... နောက်ကျောသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကြမ္မာ၏မာစတာများမှာဘယ်မှာအနေနဲ့တပ်လှန့်ပြည်နယ်မှလူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလာမယ့်။ နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ကောင်းသောယုံကြည်မှုနှင့်လန်းဆန်း Feeling ...
သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီအဖြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာ5... , နက်, နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူအတွက် ယူ. သင်၏မျက်စိဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သူတို့ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာဖွင့်လှစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဘယ်သူမျှမအလုအယက်ရှိပါသည်။